‘महिला नबेचिने देशमा जिउन चाहन्छु’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← बडीबिल्डरको आहारा
कुवेतको महबुल्लामा मैत्रीपूर्ण भलिबल खेल हुने →
‘महिला नबेचिने देशमा जिउन चाहन्छु’
Posted on 14/08/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
१३ असार २०६८ मा अमेरिकी सरकारबाट आधुनिक दासता अन्त्यका लागि क्रियाशील नायक-२०११ सम्मान पाएकी चरिमाया तामाङ भन्छिन्, “हिजो नेपाली चेलीहरू गाउँबाट भारतको मुम्बई पुर्‍याइन्थे आज गाउँ र शहरबाट खाडी देशमा पुर्‍याइन्छ ।”
तपाईंले पाउनुभएको सम्मानको के महत्व छ ?
मैले पाएको सम्मान मानवता विरोधी अभियानमा योगदान पुर्‍याउने जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिलाई अमेरिकाले दिने सम्मान हो । यो सम्मान व्यक्तिगत रूपमा मैले पाएको भन्दा पनि नेपालले पाएको हो, मानव बेचविखन विरोधी हाम्रो अभियानले पाएको हो । सबै मिलेर नेपाललाई महिला नबेचिने देश बनाउने कुरामा यो सम्मानको महत्व छ ।
तपाईंको आफ्नै जीवनसँग यो सम्मानको कस्तो सम्बन्ध छ?
वर्तमान जे छ, विगतको परिणाम हो। २०५३ साउनमा सात वटा संस्थाले मसहित १२८ दिदीबहिनीलाई भारतबाट उद्धार गरेर ल्याए। त्यसको पाँच महिनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा मलाई बेच्ने दलाल विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएँ। उजुरी दिएकै कारण मेरा दाजुभाउजूलाई मार्ने धम्की आएपछि अलग्गिएर बस्नु पर्‍यो। मैले अहिले पाएको सम्मान यिनै पीडादायी विगतसँग जोडिएको जस्तो लाग्छ।
नेपालमा यति धेरै चेली किन बेचविखनमा पर्छन्?
पहिलो कारण दण्डहीनता हो। आफ्नै गाउँ छिमेकका चेलीबेटी बेच्ने दलालहरूलाई राज्यले उचित
दण्ड-सजाय दिन सकेको छैन। अर्को कारण चेतनाको अभाव हो। स्नातक गरेका महिलाहरू समेत बेचविखनमा परेका छन्।
भारत बाहेकका देशमा पनि नेपाली महिला बेचिएका छन्?
हिजो गाउँबाट लगेर भारतका विभिन्न शहरमा बेचिन्थ्यो आज गाउँ र शहरबाट अरब देशसम्म पुर्‍याइन्छ। दलालहरूले वैदेशिक रोजगारको बहानामा त्यहाँसम्म पुर्‍याएका छन्। भाग्न खोज्दा हातखुट्टा भाँचिएका छन्। कतिपय महिला निर्दोष भएर पनि विदेशी जेलमा छन्। कैयन्ले आत्महत्या गरेका छन्।
कसले के-के गरेको खण्डमा महिला बेचविखन बन्द हुनसक्छ?
यति ठूलो समस्या फुमन्तर गरेर समाधान हुँदैन। तर, महिला बेचविखन विरोधी राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन, ऐन नियम कार्यान्वयन, गाउँगाउँमा चेतना अभियान चलाएर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। पाठ्यक्रममा चेलीबेटी बेचविखनसम्बन्धी विषय समेटिनु पर्‍यो। बेचविखन विरोधी अभियानमा क्रियाशील संघसंस्था जुट्नु पर्‍यो। हरेक नागरिकले बेचिन लागेका वा बेचिएका चेलीबेटीलाई आफ्ना बहिनी-छोरी सम्झ्नु पर्‍यो।